Qorshaha Istaraatiijiga ah & Warbixinta Sannadlaha ah - Wada-hawlgalayaasha Oregon-Gaajo-la'aanta
Waxaan la shaqaynaa la-hawlgalayaasha gobolka oo dhan si aan uga hortagno gaajada Oregon.
Waxaan haynaa rikoor adag oo saameyn ku leh siyaasadaha dadweynaha si dadka looga saaro faqriga. Sannad kasta, waxaan ka caawinnaa isku xirka kumanaan caruur ah cunto caafimaad leh sanadka oo dhan waxaana siinaa macluumaadka ku saabsan SNAP tobanaan kun oo reer Oregon ah. Waxaan tababarnaa oo aan qalabeynaa la-hawlgalayaasha maxalliga ah si ay xal ugu helaan gaajada bulshooyinkooda. Waxaan isugu yeernaa khubarada naxdinta leh ee Kooxda Howlaha Gaajada Oregon si ay tallaabo wadajir ah u qaadaan.
Horumarinta qorshaheena cusub, waxaan ka maqalnay daraasiin la-hawlgalayaal ah, tabaruceyaal iyo dadka aan u adeegno sida ugu wanaagsan ee loo kordhin karo sugnaanta cuntada labada sano ee soo socota.
Natiijadu waa ujeeddooyin cad oo diiradda saaraya saddex yool: raadinta sinnaanta, dhisidda dhaqdhaqaaqa ka hortagga gaajada iyo xoojinta awoodda ururkeenna.
Raadintayada sinaanta iyo cadaalada, waxaan dib u xaqiijineynaa ku dhawaaqida aasaaska ee Ciidanka Hunguriga ee Oregon in "dhammaan dadku waxay xaq u leeyihiin in ay ka xoroobaan gaajada" oo ay dib u go'aansadaan inay u shaqeeyaan magaca kuwa si siman loo diiday xaqaas. Labada sano ee soo socota, tani waxay ka dhigan tahay in la qodo sababaha asaasiga ah ee gaajada, sida midab-takoorka, iyo beddelka habka aan u doodno in lagu daro hoggaanka kuwa ugu saameynta badan.
Waxaan u mahadcelineynaa taageerayaasha badan ee naga caawiya inaan gaarno hadafkeena waxaana rajeyneynaa inaan kula shaqeyno!
Warbixintan sannadlaha ah wax yar bay ka duwan tahay sannadihii hore-maxaa yeelay waxay dhacday intii lagu jiray aafo caalami ah! Sheekada coronavirus-ka waxay xoojisay shaqadeena Oregon-ka Hunguri-la'aanta. Waxa kale oo ay xoojisay diiraddayada mudnaanta ugu muhiimsan - hubinta dadka Oregon, gaar ahaan kuwa taariikh ahaan laga saaray ama la takooray, inay heli karaan oo ay heli karaan barnaamijyada gargaarka cuntada.
Laga soo bilaabo waqtiyadii ugu horeeyay ee masiibada, kooxdayadu waxa ay ka shaqaynayeen in ay hubiyaan in qoysasku ay helaan macluumaadka ku saabsan cuntooyinka dugsiga inta lagu jiro xidhitaanka, qof kastaa si badbaado leh u heli karo SNAP caqabado aan loo baahnayn, iyo taageero dhaqaale oo dheeraad ah qof kasta oo u baahan gargaar yar oo dheeraad ah si uu cuntada miiska u saaro. . Akhriso si aad u maqashid wax ku saabsan shaqadii aanu qabanay sanadkii la soo dhaafay laga soo bilaabo gudbinta biilka Campuses-ka-gaajo-la'aanta si loo sugo faa'iidooyinka EBT ee faafa ee qoysaska.
ardayda la siiyo Faa'iidooyinka P-EBT sanad dugsiyeedka 2020-21 oo dhan $591 milyan oo gargaar cunto ah
la soo ururiyey laguna abaalmariyey deeqo yaryar dugsiyada, degmooyinka, iyo kuwa aan faa'iido doonka ahayn si ay u iibsadaan qalabka loo baahan yahay oo loo hubiyo in ardaydu ay heli karaan cunto inta lagu jiro xiritaanka degdegga ah
dhaafitaannada ayaa lagu guuleystey in ay ka dhigaan SNAP, WIC, iyo cuntada dugsiga sida la heli karo intii suurtagal ah inta lagu jiro xiisaddan, oo ay ku jirto kordhinta dheefaha SNAP
grassroots nonprofits ee gobolka oo dhan oo lagu taageeray deeqo si loo hubiyo in dadku ay heli karaan SNAP, oo lala beegsaday BIPOC ay hogaamiso iyo ururada dhaqamada gaarka ah
Waxaan u dabaaldegnay gudbinta biilasha Salem in:
Samee faa'iidooyin navigators kulliyad kasta oo beesha Oregon iyo jaamacada dadweynaha si loogu xiro ardayda kheyraadka si loo daboolo baahiyaha muhiimka ah sida guriyeynta iyo kaalmada cuntada (HB2836),
Kordhi maalgelinta iyo kala-duwanaanta xubinnimada Kooxda Hawl-galka Gaajada Oregon (HB2833 iyo HB2834),
Iyo in la hubiyo in dugsiyadu ay si buuxda u fulinayaan shuruudaha Dugsiyada Gaajada-La'aanta ah si ay u ballaadhiyaan helitaanka cuntada lacag la'aan (HB2536).
2022, waxaan rajaynaynaa:
Dhisidda ololaha xuquuqda macmiilka, u diyaarinta Kalfadhiga Sharci-dejinta ee 2023
Si guud u daah-furka hindisaha Cunnada Dhammaan reer Oregon oo ka bilaabmaya fadhiyada dhegeysiga si loo ogaado xalalka loona kordhiyo helitaanka cuntada bulshooyinka soogalootiga ah.
Go'aaminta qaab-dhismeedka hoggaanka joogtada ah ee ururka
Bilawga dhacdada sheeko-sheekaynta saxeexa cusub ee Guga 2022
Qorista xubnaha guddiga cusub
Daawo Warbixin Sannadeedkayaga Oo DhamaystiranLiiska Deeqaha